म फेसबुकमा अनलाइन हुँ भनेर जान्नबाट मानिसहरूलाई कसरी रोक्ने? ➡️ ➡️ अनुयायीहरू ➡️ ➡️
म फेसबुकमा जडित छु भनेर जान्न मानिसहरूलाई कसरी रोक्ने?
12 सक्छ, 20210टिप्पणी 470
सोशल मिडिया प्रयोग गर्ने धेरै तरिकाहरू छन्। कहिलेकाँही तीनिहरू समय खपत गर्छन् र थोरै भारी हुन सक्छन्। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, जब तिनीहरू अरूलाई केहि पनि देख्न मद्दत गर्दछ जुन अरूले तिनीहरूको प्रोफाइलमा कुनै समस्या बिना नै थपेको छ।
यद्यपि, सामाजिक नेटवर्कहरु संग संतृप्त हुनबाट बच्न को लागी धेरै तरिकाहरु छन्उदाहरण को लागी, फेसबुक मा अफलाईन देखा पर्दछ, जो प्लेटफर्म को प्रयोग गर्दा पनि मान्छे बाट सन्देश बेवास्ता गर्न वा सम्पर्कहरु लाई अनलाइन प्लेटफर्म प्रयोग गरीरहेको छ कि रोक्नको लागि अनुमति दिन सक्छ, यो प्रक्रिया प्राप्त गर्न निम्न लेखमा देखा पर्नेछ।
मेरो साथीहरूलाई फेसबुकमा जडान गर्नबाट रोक्नुहोस् यो कसरी गर्ने?
सबै भन्दा पहिले यो भनिएको हुनु पर्छ यो अर्को कन्फिगरेसन हो, सामाजिक नेटवर्कका लागि उपयुक्त प्रावधान, त्यसैले यो जटिल छैन र मामला जस्तो हुन सक्छ कम्प्युटर वा मोबाइल उपकरणबाट चलाउन सकिन्छ। प्रक्रिया मेसेन्जर विकल्पको माध्यमबाट गरिन्छ र कुनै पनि उपकरणमा गर्न सकिन्छ, यसको लागि तपाईंले स्थिर इन्टर्नेट जडान कायम राख्नुपर्दछ र स्पष्टतः तपाईं फेसबुक पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ।
यस अवस्थामा, यो भन्नु पर्दछ कि फेसबुक विश्वमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने सामाजिक नेटवर्कहरू मध्ये एक हो, संसारमा सब भन्दा प्रभावकारी सन्देश सेवाहरु को एक छ, जुन वास्तवमा स्वचालित हो र कसैलाई पनि कुनै उद्देश्यको लागि यसलाई प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ.
धेरै व्यक्तिहरू यसलाई एक अर्कोसँग सम्पर्कमा रहनको लागि र अन्य व्यक्तिहरूले अनुप्रयोग प्रयोग गरिरहेको बेला जान्न प्रयोग गर्दछन्। जहाँसम्म, यदि तपाईं अरूलाई अनुप्रयोग कहिले प्रयोग गर्ने जान्नबाट रोक्न चाहानुहुन्छ, गर्नुपर्ने सबै कुरा अर्को खण्डमा छोडिनेछ।
सुरु गर्न, व्यक्ति आवश्यक छ प्लेटफर्म प्रविष्ट गर्नुहोस् एक मोबाइल उपकरण वा कम्प्युटरबाट आवश्यक अनुसार।
त्यसपछि मेसेन्जरमा जानु पर्छ वा विन्डो खोल्नुहोस् जुन कुराकानी गर्न वा सन्देशहरू खोजी गर्न प्रयोग गर्न सामान्य हुन्छ, यो दुबै कम्प्युटरमा र मोबाइलमा।
गियर आइकनमा देखा पर्दछ जुन विकल्पले हेर्यो "च्याट सेटिंग्स"। यो थिचिएको हुनुपर्दछ।
विकल्पहरूको श्रृंखला देखा पर्नेछ, जस बीच तपाईंले थिच्नु पर्छ "गतिविधि मोड अक्षम गर्नुहोस्"।
यस तरिकाले, व्यक्ति अब अरुसँग सक्रिय देखिनेछैन, जबकि विकल्पले तिनीहरूलाई सामान्य रूपमा फेसबुक प्रयोग गर्न अनुमति दिँदछ। त्यस्तै, यदि तपाईं यसलाई परिमार्जन गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाईंले समान चरणहरू गर्नुपर्दछ, भिन्नता यो हो विकल्प प्रेस "फेसबुक मा शो" हुनेछ।
यो नोट गरिनु पर्छ कि फेसबुकमा धेरै सुविधाहरू मध्ये, तपाईं एक वा बढी विशिष्ट व्यक्तिको लागि च्याट अक्षम गर्न पनि सक्नुहुन्छ। प्रक्रिया मूलतः उही हो, कुराकानी असक्षम पारिएको बाहेक, तपाईंले विकल्पहरूमा "निजीकरण" खोज्नु पर्दछ।
जब यो खोल्छ र यसको प्रकार्य गर्दछ, तपाईं केवल व्यक्तिको नाम प्रविष्ट गर्न आवश्यक पर्दछ जो च्याट अक्षम गर्न चाहान्छ, ताकि तपाईंलाई थाहा छैन कि जब व्यक्ति अनलाईन वा अफलाईन छ। यो विधि प्रभावी हुनको लागि, गोपनीयता सेटिंग्स प्रयोग गर्न सिफारिस गरिन्छ ताकि यी व्यक्तिहरूले तपाइँको प्रोफाईलमा पोष्ट गरिएको सामग्री देख्न सक्दैनन्।
1 मेरो साथीहरूलाई फेसबुकमा जडान गर्नबाट रोक्नुहोस् यो कसरी गर्ने?
कसरी मेरो फेसबुक ईमेल परिवर्तन गर्न?
कसरी फेसबुक मा लाइक छिटो प्राप्त गर्ने?